Isikhulu siqinisa idolo abase-Alfred Duma – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Isikhulu siqinisa idolo abase-Alfred Duma
Isikhulu siqinisa idolo abase-Alfred Duma
Okhulumela uMkhandlu uthi amaphaphu phansi ngezimali zoMkhandlu ezisaphethwe ‘ngesinwe’
IMeya kaMasipala i-Alfred Duma uMnu uVincent Madlala
UMASIPALA i-Alfred Duma obuwaziwa ngokuthi uMnambithi uyakuphika ukuthi usuboleka imali komashonisa nosomabhizinisi bendawo njengoba bekunemibiko ethi kulo Masipala sekubonwa ngokusa njengoba ungasenayo imali futhi usengcupheni yokuguqa.
Ngeledlule iBAYEDE ishicilele udaba obelukhuluma ngokudonsa kanzima kwalo Mkhandlu, okuvela ukuthi amakhansela awo asephucwe ngisho abaqaphi, nokuthi uphiko loKlebe lungena luphuma emaHhovisi alo Mkhandlu njengoba lwenza uphenyo, nokuthiwa lugcine lushaqe amakhompyutha kwelinye lamabhilidi alo Mkhandlu.
Eminye imibiko eshicilelwe kwelaboHlanga ngeledlule, iveza ukuthi iMeya yoMkhandlu uMnu uVincent Madlala izothengelwa unyanyavu lwemoto, nakuba kucaca ukuthi lo Masipala udonsa kanzima.
UMnu uSiyabonga Maphalala oyinhloko yezokuxhumana kulo Mkhandlu uphendulile mayelana nalezi zinsolo ezingenhla. Ukuchithile ukuthi uMkhandlu unezinkinga zemali.
“Ngifisa ukukuqinisekisa ukuthi uMkhandlu uphethwe ngokusebenzisa uhlelo lomthetho ofanelekayo kanti futhi asikaze saze sacela usizo lwemali komashonisa,” kusho uMaphalala echitha eyokuntula imali kwalo Mkhandlu.
Mayelana nodaba lwamakhansela obekuvela ukuthi aqashwa ngonogada kungenasidingo, abaphinde babize imali eshisiwe uMaphalala uthe: “Ekuphepheni kwamakhansela, kumele kuqashelwe ukuthi ukuhlolwa nokuphepha nezingozi ezihlobene nokuphepha nokuvikeleka kwawo kuqhutshwa amaphoyisa, ngakho ke okuphathelene noma ukuhoxiswa kwabaqaphi angeke kwaba yizinkinga ezingaholela ekutheni uMasipala azixoxe nomphakathi. Sekukhona oboshiwe mayelana nemiyalezo esongela amakhansela, amaphoyisa ayaqhubeka nophenyo.”
ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi lithumele uMaphalala imibuzo ngokuthi ngabe isiphi isinqumo esathathwa uMkhandlu mayelana nezokuphepha kwamakhansela, nokuthi nxa sikhona ngabe sathathwa nini. IBAYEDE iphinde yacela uMaphalala ukuba ayiyalele amaphoyisa esebenzisana nawo kwezokuphepha ukuze nawo ezothithwa aziphendulele. Kuphele isonto lonke uMnu uMaphalala engabuyelanga kwelaboHlanga mayelana nokuthi ngabe isiphi isinqumo soMkhandlu esathathwa nesabe sigunyaza ukutholelwa abaqaphi amaKhansela.
Embikweni waleli phephandaba, kuhlalukile ukuthi izimoto zikaMasipala azisawethi uphethroli kunoma yimaphi amagaraji. Lokhu kuthiwa kudalwa ukuthi uMasipala ubungawakhokheli amagaraji ngenxa yakho ukweswela imali.
“UMasipala awukweleti magaraji kaphethroli. SinguMkhandlu sinelethu igaraji esigcwalisa kulo uphethroli ngaphakathi ezakhiweni zikaMasipala,” kucacisa uMaphalala.
Futhi neHhovisi lezokuqoqwa kwezimali kubalwa neMeya abakaze bathole umbiko noma ulwazi oluphathelene nokuphenywa okwenziwa ngoKlebe ngezindaba zikaMasipala. Ngingaqinisekisa ukuthi ayikho neyodwa ikhompyutha kaMasipala eke yathathwa ngoKlebe,” usho kanje.
Omunye wabasebenzi balo Mkhandlu uchazele iBAYEDE ngosizi ababhekene nalo njengoba sebethukile ukuthi kungenzeka bengaholi nxa kuphela inyanga ngenxa yokuthi uMkhandlu udonsa kanzima. Lo msebenzi uphinde waveza ukuthi enye inkinga edala ukuthi kusweleke imali kulo Mkhandlu ukuthi kuqashwa kungalandelwa imigudu. Uveze nokuthi kunabasebenzi abagcina beholela ukuhlala usuku lonke emahhovisi, bengasebenzi.
“Ngingaqinisekisa ukuthi ngoZibandlela nyakenye akuzange kuze kube nezinkinga ngesabelomali sokuholela abasebenzi, bonke bakhokhelwa ngaphambi komhla zingama-23 ngokwesivumelwano soMkhandlu ekukhokheleni abasebenzi ukuze bathenge izidingo zikaKhisimusi. NgoMasingana nonyaka siphinde sakhokhela abasebenzi bakaMasipala ngaphambi kokuphela kwenyanga ngenxa yokucabangela izidingo zokubuyela kwezingane ezikoleni njengokuvuma koMkhandlu,” kusho uMaphalala.
Uphinde waphendula nangodaba lokuthengelwa kweMeya imoto entsha, nalapho ehambe khona emazwini eBAYEDE eqinisekisa ukuthi impela izothengwa imoto yeMeya futhi nguMkhandlu ozoyithengela.
“Ngithanda ukuqinisekisa ukuba yebo uMasipala usohlelweni lokuthengela iMeya imoto entsha. Ukukhokhelwa kwemoto kuzophuma esikhwameni sesabelomali soMkhandlu.
Kuyinqubomgomo ukuba izimoto zabaphathi beHhovisi likaHulumeni zishintshwe uma ngabe sezifinyelele kumakhilomitha ayizinkulungwane eziyi-150. Ekuvumeni koMkhandlu ngenqubo kaLC9/01/2018, yamhla zingama-25 kuMasingana nonyaka, uMkhandlu uvumile ukushintshwa kwemoto yeMeya kanye nemoto kaSomlomo,” kusho uMaphalala.
Uqhube wathi imibiko yethunyelelwe kuMgcinimafa kaZwelonke, uMgcinimafa wesifundazwe kanye nowoMnyango Wezokubusa Ngokubambisana esifundazweni.
Mayelana nezidingo zomphakathi, njengoba kuvela ukuthi izidingo kazisayi emphakathini ngenxa yezinkinga ezibhekene noMkhandlu uMaphalala uthe: “SinguMkhandlu silawulwa yi-IDP, ukulethwa kwezinsizakalo kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda kwenziwa ngokusekelwa ukuba ikhona yini imali yokukwenza lokho. UMasipala wethu awukwazi ukukhokhela izinsizakalo ezisekelwe yimizwa. Kunanoma ubani ozozifaka kwisiteleka ngoba efuna umgwaqo angalokothi alindele ukuthi uMkhandlu uzokwakha umgwaqo ngosuku olulandelayo. Ukulethwa kwezidingo akuhanjiswa ngeziteleka nemibhikisho. UMasipala i-Alfred Duma wabamba umhlangano wawo we-IDP Wokuhlelwa Kwamasu ngomhla zingama-28 kuNhlolanja nonyaka wasongwa zimbili kuMbasa nonyaka,” kuchaza uMaphalala encwadini abeyithumele.
Uveze ukuthi ezezimali zisahamba kahle eMkhandlwini nathe imibiko iyakufakazela lokho.
“Singathanda ukukubeka kucace ukuthi mayelana nokuhlolwa kwezitatimende zangaphakathi zesabelomali zinyanga zonke kanye nombiko wokubhekelelwa kwesabelozimali zaphakathi nonyaka, isifundazwe sikwesekile, uMasipala unezikhawulelo zezimali ezinhle kanye namabhalansi amahle ebhange,” kusho uMaphalala.